Mijery tele na sarimihetsika na sarimihetsika isan'andro ve ianao? Avy eo ianao dia voan'ny hypnosis feno ary tsy matotra: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 31 Janoary 2019	• 7 Comments
Ny eto an-toerana matetika lazaina ary misy ezaka tsy misy farany ny manazava izany, fa ny amin'izao fotoana izao indray no manokatra fotoana bebe kokoa miaraka amin'ny fanambarana mazava: Tsarovy isan'andro tantara mitohy TV na sarimihetsika? Avy eo ianao dia feno ny hypnosis ary tsy matotra. Mahatsiaro anao izao ve ianao? Na tsindrio avy hatrany ny lakroa amin'ny navigateur mba hamafa haingana ity lahatsoratra ity? Jereo ny lahatsary eto ambany. Ny antony tsy tianao hinoana izany dia mety ho hita amin'ny hoe tia ny andian-tantara ianao ary tsy mahita ny ratsy ao aminy. Mino koa ianao fa afaka mahavita mijery ny vaovao NOS ianao amin'ny fahatokisana fa ny sasantsasany dia manaparitaka anao. Tsy izany mihitsy no zava-drehetra. Na dia fantatrao aza fa ny fahitalavitra dia natao hampidirina anao amin'ny hypnose, mety mino ianao fa misy fiantraikany amin'ny vahoaka marefo ihany izany. Mino ny fahatsiarovanao ianao ary tsy mifehy anao izany. Izany tokoa!
Ny fijerena ny vaovao avy amin'ny NOS dia mifototra amin'ny teknolojia hipnotika lalina. Nahoana ny mpamaky vaovao no nijanona teo ambadiky ny latabatra, kanefa moa ve isika mahita ny mpamaky vaovao avy any ankavanana hiverina sy hiverina indray? Nahoana ianao no mahita faritra mihodina ao ambadika? Teknika rehetra izy ireo hitondra anao amin'ny hypnosis hatramin'ny fanombohana azy. "Handeha ho an'ny mpitati-baovao ao La Haye izahay", lohahevitra vaovao, "Hiverina any amin'ny mpahalala anay izahay ao The Hague". Vao mafana mahazatra ny feo, miodina (milamindamina) faribolana eo aoriana, ny indray ary nivoaka ny vaovao, ny indray ary mivoaka avy amin'ny toetr'andro vehivavy, sy avy amin'ny fakan-tsary rehetra hypnosis. Ary avy eo dia tsy niresaka momba ireo fihenan-tsary izay azo atao mba hahatonga ny atidoha hivoatra kokoa amin'ny vokatr'ity hypnose ity.
"Eny e? Tiako ny mitoetra ao ambanin'ny hypnosis. Hypnose dia mahafinaritra be. Tsy mahita loza aty aho ". Tsia, izany dia satria ny sainao eo an-tsainao dia natao mba tsy hahita loza. Ny atidohanao dia miorina amin'ny hevi-baovao tsy dia manaiky ny fanakianana ary manaiky ilay hafatra nomanina ao an-tsainao amin'ny hypnosis ho fahamarinana.
Mijery andian-dahatsoratra marobe amin'ny Netflix ve ianao? Avy eo ianao dia eo ambanin'ny hypnosis ary ny sainao eo an-tsainao dia voatendry. Na dia mijery andian-tantara toy ny Black Mirror aza ianao; Iray amin'ireo andian-tantara izay hampiharihary zavatra maro izay hitranga tsy ho ela. Na dia mijery ny fanadihadiana fa "miteraka fanentanana" ny fiovan'ny toetr'andro, ohatra, ny hevitrao amin'ny ambaratonga mahatsiaro tena mety ho "mahatsapa", fa na mipetraka subconsciously mbola ho hypnosis fitaovana. Amin'ny habakabaka, dia misongadina amin'ny hafatra samihafa ny sainao. Ary mbola manana Youtube sy ireo fitaovana enti-mody amin'ny alàlan'ny sehatr'izy ireo izahay, izay tsy fantatsika raha afaka mampiditra teknika toy izany ny mpamatsy. Na izany aza, ny fahitalavitra dia nijanona ho an'ny hnnotista nomerika 1. Izany no mahatonga anao tsy mitsahatra mijery sy lasa mpidoroka amin'ny andian-tantara mahaliana indrindra. Tsy maintsy asehonao an-tsitrapo an-tsitrapo ny fanjaitra hodi-janak'olombelona ao anaty sambon-kena ianao amin'ny alàlan'ny tsy fahatsiarovan-tena (subliminal).
Manomboka amin'ny fahatanorany izy io, izay ametrahan'ny reny ny zanany eo anoloan'ny tavoahangy na amin'ny iPad mba hijerena sarimihetsika, noho izany dia mangina mandritra ny fotoana fohy izy ireo. Noho izany, hatramin'ny fahazazanay taloha dia lasa zatra an'io trangam-pandrenesana hypnotic io izahay ary izany dia fiankinan-doha. Nanjary lasa mpidoroka amin'ny programam-pandaharana izahay ary ny hevitra izay ananantsika na ny fampiharana antsika dia efa nomanina. Ny fanontaniana tiako hangatahana anao dia hoe: "Maka iray ianao junk heroin Tena matotra raha mifanena aminy eny an-dalambe ve ianao? "Mety ho tsia ny valiny, satria fantatrao fa misy zava-mahadomelina ilay olona. Mangataka anareo aho ny fanontaniana hoe: "Azoko hanampy anao raha an-tsainao dia amin'ny alalan'ny hypnosis drugged fotoana feno sy mandritra ny ora maro ny fandaharana isan'andro subliminal" Ny valiny dia "tsy misy". Mampalahelo fa ny fivarotana sy ny fandehanana amin'ireo olona izay mijery ora maro na fahitalavitra mandritra ny andro vitsivitsy dia faritana amin'ny tsy fahita firy. Miaraka amin'ireny olona ireny dia misy fiantraikany mahatsiravina ny famoahana azy ireo indray, saingy ny mety ho voka-pifidianana dia hotsikiny indray rahampitso. Ny fandaharana dia mandany volana, raha tsy taona. Ny hany fitsaboana hialana amin'ny hipnotika lalina dia ny: mijery ny fahitalavitra! Tsy indray andro. Mandrakizay! Atsaharo izany!
Mahafantatra olona mandinika ny fahitalavitra ve ianao? Alefaso amin'ny alalan'ny mailaka io hafatra io.
Ny matoantenin'ny vatana vaovao sy fahalalana mbola tsy nisy toy izany: raha ny marina ihany (ny fahalalahana miteny sy ny teny anglisy takiana!)
Ronald Bernard ampahany amin'ny 3 indray feno teknolojian'ny NLP
Fa nahoana no mijery ny fahitalavitra, horonantsary & andian-tantara, mihaino radio, mamaky gazety, boky sy gazety
Tags: Featured, horonan-tsary, hypnosis, Netflix, Serie, andian-dahatsoratra, tv
31 Janoary 2019 ao amin'ny 11: 23
FILAZANTSARA HO AN'NY ZATOVO, tanora, efa antitra
Eto ambany eto amin'ny rohy dia hitan'ny ray aman-dreny fa kely loatra ny ankizy nefa mbola mihevitra fa ny zavatra mahazatra indrindra eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy atao ho an'ny ankizy lehibe
Ny vaovao momba ny tanora (fitondram-panjakana) dia ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra.
ary avy eo izy ireo dia manomboka miresaka momba ny fihetsiketsehana ary inona marina i Pegida,
Tonga tahaka ny mofomamy ny zava-drehetra ary ny mpampianatra dia mamindra sy mino ny zava-drehetra, satria milaza ny NPO fa marina izany.
31 Janoary 2019 ao amin'ny 21: 28
Tsy mampaninona ny karazana fomba ampiasainao izany, raha toa ka manintona izy io dia mitranga amin'ny zavatra iray ihany. Fieritreretana zavatra hafa!
Nijery ny laharana Outlander tao amin'ny Lightbox aho, noho izany dia afaka mitondra ahy serivisy aho 😉 Tsara maromaro fa raha toa ianao ka marin-toetra dia asehony tsara izay tadiavinay. Azo atao ny miaina ao anatin'ny fotoana maromaro, dia mahazatra ny manangana ankizy hafa. Be dia be ny firaisana, mila vakiana raha tsy izany dia mitranga ny kitrotro. Asehony mazava fa ny hetra dia nomena ihany koa ary mila miady amin'izany ianao.
Tsy nisy niova nandritra ireo taona rehetra ireo, hanoherana ilay milina.
Ilay milina misintaka antsika.
1 Febroary 2019 ao amin'ny 05: 58
1 Febroary 2019 ao amin'ny 09: 21
Fantaro fa tsy nahazo valinteny omaly ianao. Namoaka i 2.
1 Febroary 2019 ao amin'ny 11: 27
1 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 19
Raha marin-toetra aho, dia tokony hilaza mihitsy aza aho fa ny sarimihetsika izay napetrakao eo ambany lahatsoranao dia ny tanjon'ity sainao ity, ka ny mpikaroka marina dia voasasa amin'ny atidoha.
Io monotone tsy miovaova io dia mifototra amin'io feo tokana io, ny fifehezana ny saina rehetra.
2 Febroary 2019 ao amin'ny 18: 09
Ny mpampianatra 'any am-pianarana dia tena mpangalatra fanahy
ny zanakay kely. Ny ankizy dia tsy mahazo misaina manokana ary tsy mametraka fanontaniana sarotra ho an'ny 'mpampianatra'. Ampianarina ny ankizy mba hitondra tena mifanaraka amin'ny "ekipa" groupthink, dia nanontany nanorotoro ka dia-tsiny ny olona toy izany Weather andevo tsy ho ela toy ny ray aman-dreniny izao. Mpanompo tsara avy amin'ny Hen.
« George van Houts, mpamitaka, tsy misy miafina amin'ny banky na ny placier ho an'ny mpitsikera?
Ny mpandika lalàna Celine Dion NuNuNu 'New Order' ("gender neutral") »
Total visits: 8.605.466